Clash of Clans dia nahazo fanavaozana lehibe tamin'ny Townhall 11 | Androidsis
Clash of Clans dia mandray ny iray amin'ireo fanavaozana lehibe indrindra miaraka amin'ny Town Hall 11
fa Olona 17 tapitrisa no tia ao amin'ny pejy Facebook Clash of Clans, asehony ny lazan'io lalao Supercell lehibe io izay nahavita nahita ny lakile mety ka samy mpampiasa izay tsy tia mampiasa micropayments sy ireo izay mandany indraindray rehefa amin'ny boaty, izy ireo dia afaka miady hevitra amin'ny fanajana ny maha mpilalao mahay indrindra ary an'ny foko tsara indrindra eran'izao tontolo izao. Ny iray amin'ireo kalitaony dia ny tsy fiatrehantsika ny karama mahazatra handresena, izay namela azy hiakatra toy ny sombin-javatra ary imbetsaka ny olona manontany tena ny amin'ny tafo misy azy, satria toa tsy manana izany izy aorian'ireo fanavaozam-baovao voaray tao. ny androm-piainana fohy.
Izao dia raiso ny iray amin'ireo fanavaozam-baovao tena tadiavin'ny mpilalao an-tapitrisany milalao ity lalao paikady ity miaraka amin'ny Town Hall 11. Miaraka amin'ny Town Hall 11 fidirana amin'ny lapan'ny tanàna ambaratonga 11 izay manokatra varavarana ho an'ny maherifo vaovao, ny mpiambina lehibe ary inona no fiarovana vaovao: ny voromahery artillery. Azonao atao ihany koa ny miantehitra amin'ny ambaratonga vaovao an'ny tafika, ny ambaratonga fiarovana vaovao ary ny fanomezana ozona avy amin'ny fianakaviana. Ny antsipiriany hafa dia ny famolavolana rafitra fiarovana vaovao izay mamela hanafika rehefa tadiavin'ny mpampiasa sy ny bonus ho an'ny ligy ary ny tolotra amboara lehibe kokoa. Andao hofantarintsika ny fivoaran'ny iray amin'ireo fanavaozana lehibe indrindra amin'ny Clash of Clans.
1 Town Hall 11
2 Ny Sentinel Lehibe sy ny Voromahery Artillery
3 Fifanakalozana ozona, ampinga ary mpiambina
4 Ny fandrobana ny efitranon'ny tanàna sy ny fifandanjan'ny traikefa amin'ny lalao
Avy amin'ireo andalana ireo manana isika nanaraka ny fivoaran'ny lalao lehibe nataon'i Supercell. Efa amam-bolana izay no nanaovanay hevitra momba ny vaovaony, fa ity fanavaozana lehibe ity no fotoana tsara indrindra amin'ny iray amin'ireo lalao video tsara indrindra ho an'ny finday.
Ahoana no hataontsika a famerenana tsara an'io lisitra fanamarihana tsara io Izahay dia mamerina mijery ireo zava-baovao nampitolagaga indrindra tamin'io ho an'ny filankevitry ny tanàna izay manomboka amin'ny 10 ka hatramin'ny 11, izay ahafahantsika mamolavola andiana tranobe marobe sy ireo mahery fo sy tafika hafa. Anisan'izany ny mpiambina lehibe sy ny voromahery artillery, ny ambaratonga vaovao an'ny tafika, ny fiarovana sy ny fanonononan-tsampona ny fianakavian'ny fianakaviana, ary ny fahafaha-manafika lehibe isaky ny tianao rehefa manana ampinga mavitrika ianao.
Aza adino ireo misy fiarovana vaovao azo Ahitana tafondro fanampiny, tilikambo mpandefa zana-tsipìka, tilikambo mpamosavy ary zana-tsipìka, raha toa kosa ka manana ambaratonga vaovao ny minion, mpamosavy ary tilikambo mpamosavy.
Ny Sentinel Lehibe sy ny Voromahery Artillery
Ny mpiambina lehibe no hikarakara hamafiso ny tafika manodidina rehetra ary mahatonga azy ireo tsy ho resy vetivety. Izy io dia manana ny fahaizana mitsambikina sy manidina ka io no iray amin'ireo safidy tsara indrindra ampidirina ao anaty paikady izay matetika ampiasanao amin'ny Clash of Clans.
Ny voromahery artillery dia a fitaovam-piadiana lava izany dia tompon'andraikitra amin'ny tafika mpanafika tsy vonona. Mandrosoa akorandriaka akorandriaka mipoaka izay hanapotika ireo tafika mahatohitra indrindra ary hanimba ireo izay akaikin'ny toerana misy fiantraikany. Ny fotoana tokana ahafahana mamelona azy dia rehefa tafika maro no naparitaka, izay mahatonga azy io ho safidy azo antoka amin'ny fitokonana taktika sy fitokonana multiphase.
Fifanakalozana ozona, ampinga ary mpiambina
Avy amin'ny ambaratonga 4 amin'ny tranon'ny fianakavian-drazanao dia azonao atao mangataha ody booster ankoatry ny inona ny miaramila. Ireo ody nomena ireo dia hisarihana loka homamiadana ary hanana fiasa manintona toy ny ody ranomandry izay sokafana ankehitriny ao amin'ny lapan'ny tanàna ambaratonga 9 ary nampitombo ny faharetany amin'ny ambaratonga ambany.
Ny iray amin'ireo fanovana lehibe indrindra tamin'ity fanavaozana ity, ary iray izay mitaky be dia be dia ny tsy fahaizana manome ampinga rehefa rava ny lapan'ny tanàna, noho izany dia ilaina izao ny miaro azy tsara mba tsy hanafihan'izy ireo antsika indraindray. Izany dia mitarika antsika handray ampinga rehefa iharan'ny fanimbana 30%, ary betsaka kokoa rehefa mijaly 60%, saingy rehefa tafika maro no manafika.
Ny iray hafa mampiavaka ny ampinga dia izany azonao atao ny manafika rehefa manana izany ianao, na dia hahena aza ny faharetany.
Ny mpiambina dia toetra iray hafa mampiavaka ny fiarovana, hatramin'ny miaro ny mpilalao amin'ny fanafihana sady mamela anao hanafika ny hafa isaky ny tianao. Horaisina maimaimpoana rehefa lany ny ampinga ary amin'ny ligy ambony dia omena iray avo kokoa. Ny ligin'ny Titans I sy ny League of Legends dia mahazo fandrakofana 100%. Aza adino fa isan'andro dia hisy mpiambina fanampiny 2 ora misy amin'ny fivarotana.
Ny fandrobana ny efitranon'ny tanàna sy ny fifandanjan'ny traikefa amin'ny lalao
Fanafihana izao tombony ambonimbony kokoa amin'ny looba sy amboara. Izany dia mitranga satria ny lapan'ny tanàna dia manana be dia be ary misy ny tombony amin'ny ligy, saingy miankina amin'ny isan-jaton'ny fanimbana naterak'izany.
Toy ny mitranga amin'ny fanavaozana lehibe iray, ary azo antoka izany hisy kely hiseho Mba hanitsiana ny bibikely sy handanjalanjana ny lalao dia manana fiasa vaovao amin'ity lafiny ity izy, toy ny:
Ferana fe-potoana ady nitombo hatramin'ny 30 segondra
Nanafika ny lapan'ny tanàna sy ny Castle Castle ny Goblins ankehitriny noho ny fahasimbana roa sosona
El Nihena ny vidin'ny famandrihana be loatra
Ny vidin'ny famindrana indray ny tsipika rehetra dia nahena be
Mpanasitrana marobe no manana vokany mihena amin'ny singa iray ihany
Ny fanafainganana ny miaramila dia nahena ho vatosoa 5 isaky ny adiny iray hafainganam-pandeha
Ny Ifaharanitan-tsaina artifisialy fitadiavana làlana ary ny ady ataon'ny miaramila dia novaina sy namboarina
Zanaka vaovao kely maro hafa ho an'ny lalao, ka mitodiha any amin'ny lalao hahita azy ireo eo an-toerana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Clash of Clans dia mandray ny iray amin'ireo fanavaozana lehibe indrindra miaraka amin'ny Town Hall 11